Netflix ၏ 'The Old Guard' သည်နွေရာသီ Premiere နေ့ကိုသတ်မှတ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း Netflix ၏ 'The Old Guard' သည်နွေရာသီ Premiere နေ့ကိုသတ်မှတ်သည်
by Waylon ဂျော်ဒန် မေလ 13, 2020
ကရေးသား Waylon ဂျော်ဒန် မေလ 13, 2020
Netflix ရဲ့ အစောင့်ဟောင်း streaming platform တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်တွင်စတင်မည်။
တူညီသောအမည်ဖြင့်သောဂရပ်ဖစ် ၀ တ္ထုကို အခြေခံ၍ ရုပ်ရှင်သည်သူတို့ဝန်းကျင်ရှိသေတတ်သောကမ္ဘာကိုကာကွယ်ပေးသောမသေနိုင်သည့်ကြေးစားအုပ်စုတစ်စုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
Gina Prince-Bythewood သည် Greg Rucka ၏ဇာတ်ညွှန်းကို အခြေခံ၍ ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးခဲ့သည်။WhiteoutLeandro Fernandez နှင့်အတူရုပ်ပြပူးတွဲဖန်တီးသူ) ။
Charlize Theron (ဧရာမသတ္တဝါကြီး) အန်ဒီ၊ ကြေးစားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်။ သူမသည် Chiwetel Eljofor နှင့်ပူးပေါင်းသည်။ဆရာဝန်ထူးဆန်း), ဟယ်ရီ Melling (ထို ဟယ်ရီပေါ်တာ franchise), Natacha Karam (အမိမြေ) ကီကီလန်း (Beale Street, စကားပြောနိုင်ပါလျှင်), Marwan Kenzari (Aladdin) နှင့် Veronica Ngo (တောက်တောက်).
အစောင့်ဟောင်း Image Comics မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Rucka အရေးအသားနှင့်အနုပညာလက်ရာများကိုဖာနန်ဒက်စ်မှထုတ်ဝေခဲ့သည် Deadpool နှင့် အပြစ်ပေးသူ - မက်စ်.
မူရင်းစီးရီးသည်ပြissuesနာငါးခုနှင့်ဒုတိယစီးရီးနောက်တွင်ပါခဲ့သည် ဟောငျးအစောင့်: Force မြှောက်။
အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးလှောင်ပြောင်နောက်တွဲယာဉ်ကိုကြည့်လိုက်ပါ အစောင့်ဟောင်း အောက်ဖော်ပြပါနှင့် ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်၊ Netflix တွင်ကြည့်ပါ။
charlize theronGina Prince-Bythewoodဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုNetflix နဲ့အစောင့်ဟောင်းWaylon ဂျော်ဒန်
သင်္ချိုင်းမတိုင်မီခေါင်းတလားထဲမှ Corpse“ Waves” အဖြစ်စောင့်ကြည့်ပါ
စတီဖင်ကင်းနှင့်ဂျိုးဟေးတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ“ အခိုးအငွေ့” သည် HBO Max တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်